Asturcón, faraskii ugu dambeeyay ee Yurub u dhashay | Fardaha Noti
Dhaladka Asturias, Asturcón Waa qayb ka mid ah jinsiyadaha, waqtiyadii hore, ay ku badnaayeen dhulalka ka baxa buuraha Cantabrian ilaa Pyrenees.
Sidoo kale loo yaqaan faras Asturian, Waa nooc yar oo jilicsan oo loo yaqaan 'equine', taas oo dayactirtay qaab-dhismeed aad u la mid ah goorta tartanku wuxuu u kacay sida tan oo kale 2.800 sano ka hor.
Wax badan ma ka ogaanay xayawaanadan xiisaha leh?
Asturcón waa mid ka mid ah fardo yaryar ama faan yar oo adduunka ugu faca weyn. Horaa loo ururiyay markhaatiyada ka hadlaya iyaga sannadihii 80 a. C. oo ka tarjumeysa sida ay iyagu ugu qaddarin jireen xawaaraha iyo geesinimada dagaalka, marka lagu daro socodkiisa fudud.
Dhaqan ahaan ayey u ahaan jireen loo isticmaali jiray howlaha beeraha, inkasta oo tartanku sii fidayay loona adeegsanayay hawlo kale. Qarnigii XNUMXaad ee Paris, tusaale ahaan, waxaa loo adeegsaday sidii fardaha qabyada ah gawaarida yar yar.
Maanta Asturcones sidoo kale waxay sameeyeen jidkooda cayaaraha Equine. Tijaabooyin dhowr ah oo noocani ah ayaa gaaray meesha ugu sareysa sida Horyaallada fardo ee qaabab kala duwan oo Spain ah.
1 Sida ay yihiin?
2 In yar oo idinka mid ah taariikh
5 Bandhigga Asturcón
Iyadoo a dhererka qiyaastii 125 cm., Asturcones waa isleegyo yaryar oo muuqaalkoodu guud yahay kan a firidhsan, dhaqaaqa iyo adkaysi u leh, mahadsanid muruqeeda si fiican loo qeexay.
Madaxiisa dhexdhexaadka ah oo leh muuqaal yar oo ciriiri ah, wuxuu leeyahay weji ballaadhan oo lagu daboolay buunshaha qaro weyn; indho waaweyn, madow, nool; dhagaha yaryar oo aad u wareega, iyo sanka oo ballaadhan oo ballaadhan.
Qoorta oo dhexdhexaad ah oo saami ahaan u eg ayaa badanaa lagu qalooca ragga qaangaarka ah. Waxay leedahay muraayadaha hore, oval iyo yar yar, halka kuwa dambe ay aad u yar yihiin ama aysan jirin.
Jirka, ee espalda waa mid aad u foorarsanaya, sida qoobka oo kale, iyo feeraha si fiican u roon, oo ku dul fadhiya addimada khafiifka ah ee qoobab yaryar, wareegsan oo aad u adkaysi badan.
El dhogorta ee noocani waa mid cufan leh manjo aad u yar iyo dabo hoose. Midabka jubbadiisa ayaa ah madow, in kastoo ay ku kala duwan yihiin xilliyada. Asturcón wuxuu la qabsadaa cimilada buuraha wuxuuna ku daboolaa jirkiisa a jaakad timo qaro weyn oo bunni ah oo kaa ilaalinaysa waxyaalaha jira xilliyada qabow.
Marka laga hadlayo dabeecadooda aad bay u yihiin sharaf leh oo xoog leh. Mar uun dajiyey, oo waxay muujiyaan dabeecad wanaagsan, ku habboon carruurta. Waa isku mid aad ugu raaxeysan leh dabeecad aad u wanaagsan oo lagu boodayo.
Tixraacyo taariikhi ah ayaa tilmaamaya in Asturcones ay dib uga soo noqotay in ka badan 2.000 oo sano. Aad u badan Qoraallada ay Roomaanku ku xusayaan fardahan maadaama ay ka mid ahaayeen ciidammadii Boqortooyada Roomaanka.
Inta lagu jiro Da'da Dhexe iyo Casriga, asturcón waxay aad muhiim ugu ahayd dhaqaalaha Spain. Waxaa loo dhoofiyey dalal ay kamid yihiin Ireland ama France halkaas oo ay ku jiideen gawaari yar yar. Intaa waxaa dheer dabcan in laga iibiyo aagagga kala duwan ee Isbaanishka sida faraska beeraha.
Noocan quraafaadka ah ayaa la ilaaliyay waqtiga iyo maanta waxay ka kooban tahay mid ka mid ah jibbaarayaashii ugu dambeeyay ee jinsiyadaha autochthonous ee Koonfurta Yurub.
Noocan wuxuu ka mid yahay qoys ballaaran oo faras yaryar leh ama faanyo kuwaas oo loo qaybiyay Arc Atlantic, Qeybta xeebta badweynta ee ka timaadda Boortaqiiska ilaa Iskotland oo ay ku jiraan Spain, France, England, Wales iyo Ireland.
Maanta waxaan heli karnaa sagaal nooc oo astaamahoodu la mid yihiin: Garrano, Pottok, Dartmoor, Asturcón, Exmoor, Wales, Shetland, Highland iyo Connemara.
Laakiin aan dib ugu noqonno Asturcón. Mahadsanid inaad degto gobolka buuraleyda iyo buuqa leh ee Asturias, oo leh isgaarsiin adag ilaa qarnigii labaatanaad, tartanka awooday inay ilaaliso nadiifnimadeeda iyadoo ka hortageysa iskutallaabyada taasi waxay ka dhigtay inay lumiyaan astaamahoodii iyo, intaa waxaa sii dheer, waxay xadiday shaacinta iyo dhoofinta.
Xaaladaha deegaan ee ay ku soo kordheen astaamahani, waxay door bideen muuqaalka qaar ka mid ah waxyaabaha keli keli ah ee isirku leeyahay, sida, tusaale ahaan, kuwa loo yaqaan qaab caan ah "Corru." Waa istiraatiijiyad difaac ah iyagoo ku urursan baakado ay ku dhex noolyihiin Asturcones si ay ula kulmaan weerarka yeyda sida caadada u ahayd dhibkooda. Markay khatar jirto, xayntii fardaha ayaa diyaar ah goobaabin oo burooyinku gudaha ku jiraan oo madaxa dibedda u jeedaan si ay isaga difaacdo lugaha hore. Intaa waxaa dheer, waxay dhigaan dillaacyada ku yaal bartamaha wareegga halka ay aadka uga ilaaliyaan.
Maanta, Asturcones waxay sii wadaan inay ku noolaadaan buuraha, in kasta oo beeraha taranka ay sidoo kale ku bataan halka tijaabooyinka ugu wanaagsan laga soo xulay, iyagoo doorbidaya horumarka iyo cimri dhererka taranka.
Gaarsiinta ayaa la imaanaysa xilliga gu'ga. Ka dib kow iyo toban bilood oo uur ah, mareegaha ayaa ka soocay lo'da si ay u raadsadaan meel xasilloon oo gabbaad ah oo ay ku dhasho Asturcón cusub. Ficil ahaan ku dhowaad had iyo jeer xaqiiqadani waa mid aad u dhakhso badan oo qarsoodi ah habeenkii, sidaas awgeedna waxay yareynaysaa suurtagalnimada weerar.
Calaamadda kale ee xoogga tartanka waa intaas oo keliya sagaal maalmood ka dib dhalmada, marsooyinka ayaa mar kale kuleylka galaya, taas oo u horseedaysa inay si joogto ah u koriso illaa ay ka gaadhayaan shan iyo labaatan jir.
80-yadii, dadaallada gaarka loo leeyahay iyo ururrada soo ifbaxaya sida Ana (Asturian Association of Friends of Nature), oo ay weheliso kor u qaadista wacyiga deegaanka ee waqtiga, Waxay ku guuleysteen inay joojiyaan hoos u dhaca naxdinta leh ee taranka. Ku Ururka Asturcón Breed Pony Breeders Association (ACPRA). Maqnaanshaha taranka wuxuu umuuqday mid dhow laakiin ficillada laqaaday waa lagu guuleystay oo taranka ayaa la helay.
Si loo soo gabagabeeyo maqaalkan iyo xiisaha, waxaan ka hadlaynaa xaflad ka socota Asturias agagaarka xayawaankan.
Majada de Espineres, bartamaha dabeecadda (Sierra del Sueve, Pilo )a), waxaa ka jira xaflad u dabaaldegeysa soo kabashada faras Asturia, this hooyo, duurjoogta ah iyo nooca rustic. Waa maalin ay ka buuxaan nashaadyo halkaas oo dharka lagu soo bandhigo iyo bandhigga muunado la soo saaray oo labaduba ay fuushan yihiin fardooley iyo jiidayo gawaari duug ah oo taagan.
Xisbiga ayaa ahaa shaacisay xiisaha dalxiiska ku jirta Maamulaha Asturias.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Asturcón, waa faras duurjoogta Yurub ugu dambeeya
Faraska Cartuusiyaanka, oo ka mid ah faracii reer Andalus